Ciyaaraha looxa ugu wanagsan qoyska | I sii wakhti firaaqo
Isaac | 17/12/2021 17:47 | La cusbooneysiiyay 21/12/2021 09:02 | General
Waxyaabo yar ayaa ka fiican inaad waqti la qaadato kuwa aad jeceshahay, lammaanahaaga, qoyskaaga, ama carruurtaada. Maalmo, galabnimo iyo habeen ku ciyaarista guriga oo aad ka tagto waqtiyada xusuusta badan ee had iyo jeer la xasuusan doono. Taasna si ay suurtogal u noqoto, waxaad u baahan doontaa qaar ka mid ah ciyaaraha guddiga ugu fiican ee qoyska. Waxaan ula jeedaa ciyaaraha looxa oo qof walba jecel yahay, carruurta, dhalinyarada, dadka waaweyn iyo waayeelka.
Si kastaba ha ahaatee, marka la eego tirada ciyaaraha la heli karo iyo sida ay u adag tahay in qof walba laga dhigo madadaalo siman, ma aha hawl fudud in la doorto. Halkan waxaan kugu caawineynaa inaad sameyso, oo leh qaar ka mid ah talooyinka ugu fiican, oo leh iibinta ugu fiican iyo madadaalo maxaad ka heli kartaa...
1 Ciyaaraha guddiga ugu fiican ee lala ciyaaro qoyska
1.1 Disset Party & Co Qoyska
1.2 Qoyska Raadinta ee Fudud
1.4 Kobaca qoyska
1.6 Jacaylka erayada Daabacaadda Qoyska
1.7 Bizak Carruurta lid ku ah waalidiinta
1.8 Sheeko Culays ah
1.9 Bang! Ciyaarta Wild West
1.10 Martida aan munaasabka ahayn ee Gloom
2 Ciyaaraha looxa madadaalada ee loo ciyaaro qoys ahaan
2.1 Game Off Guutada madax-ilaa-madaxa ah
2.3 Cutubyo sheeko
3 Sidee loo doortaa ciyaarta guddiga qoyska ee wanaagsan?
Ciyaaraha guddiga ugu fiican ee lala ciyaaro qoyska
Waxaa jira qaar ka mid ah ciyaaraha guddiga oo loo ciyaaro qoys ahaan kuwaas oo ka mid ah kuwa ugu caansan. Shaqooyinka dhabta ah ee farshaxanka madadaalada iyo madadaalada si aad waqtiyada ugu fiican ula qaadato kuwa aad jeceshahay oo badanaa leh da'o kala duwan, marka lagu daro qirashada kooxo badan oo ciyaartoy ah. Qaar talooyinka Waxay yihiin:
Disset Party & Co Qoyska
Disset - Party & Co Family...
Waa Xisbiga caadiga ah, laakiin daabacaad gaar ah oo qoyska ah. Ku haboon laga bilaabo da'da 8 sano. Gudaha waa inaad ku samaysaa tijaabooyin badan marka ay noqoto wakhtigaaga, waxaana loo ciyaari karaa kooxo. Ku dayasho, sawir, ku daydo, ka jawaab su'aalaha, oo gudbi su'aalo xiiso leh. Hab lagu wanaajiyo xidhiidhka, aragga, kooxda ciyaarta, loogana gudbo xishoodka.
Qoyska Raadinta ee Fudud
Ciyaarta looxa yar...
Ciyaar ku haboon dhammaan da'da laga bilaabo 8 sano jir. Waa ciyaarta su'aalaha iyo jawaabaha caadiga ah, laakiin daabacaadda qoyska, maadaama ay ku jiraan kaararka carruurta iyo kaararka dadka waaweyn, oo leh 2400 su'aalood oo dhaqanka guud ah si loo tijaabiyo aqoontaada. Intaa waxaa dheer, loolan Showdown ayaa lagu daray.
Ciyaaraha Mattel -...
Dhammaantood way ciyaari karaan laga bilaabo 8 sano jir, iyagoo leh awood ay ku ciyaaraan min 2 ilaa 4 ciyaartoy ama sidoo kale waxay sameeyaan kooxo. Waa mid ka mid ah ciyaaraha looxa ugu wanagsan ee qoysaska, kuwaas oo ujeeddadoodu tahay inay eray ama odhaah ku qiyaasaan sawirro. Waxa ku jira sabuurad cad, calamadaha, kaadhadhka tusaha, sabuurada, saacada wakhtiga, laadhuu, iyo 720 kaadhadh.
BOOM QOYSKA - Ciyaarta...
Qoyska oo dhan ayaa ka qayb qaadan kara ciyaartan caadiga ah. 300 oo kaarar madadaalo ah oo kala duwan, loox, fudud in la ciyaaro, oo leh caqabado, ficilo, halxidhaaleyaal, koolkoolin, ciqaabo khiyaamo, iwm. Hab fiican oo aad ku soo ururin karto dhammaan kuwa aad jeceshahay oo aad ku hesho wakhti fiican.
Soo iibso Kobcinta Qoyska
Repos Soo saarista-Fikradda...
Qoyska oo dhan waa ciyaari kara, lagu taliyay laga bilaabo 10 sano jir. Waa ciyaar madadaalo iyo firfircooni leh oo aad ku horumarinayso hal-abuurkaaga iyo mala-awaalkaga si aad u xalliso xujooyinka. Ciyaaryahanku waa inuu isku daraa calaamadaha ama calaamadaha caalamiga ah si uu isugu dayo in kuwa kale ay qiyaasaan waxa ay ku saabsan tahay (jilayaasha, cinwaanada, walxaha, ...).
Jacaylka erayada Daabacaadda Qoyska
Ciyaar loogu talagalay dhalinyarada iyo waayeelka, si ay u ciyaaraan qoys ahaan oo ay caawiyaan xoojinta xiriirka ka dhexeeya ka qaybgalayaasha. Loogu talagalay in lagu rafcaansado awoowayaasha, awoowayaasha, waalidiinta iyo carruurta, iyaga oo ka caawinaya inay waqti fiican ku qaataan 120 kaarka oo leh su'aalo madadaalo leh iyo ikhtiyaarro u horseedaya mawduucyo wada hadal oo kala duwan.
Kalmado ku iibso jacaylka
Bizak Carruurta lid ku ah waalidiinta
Wiilasha Bizak ee ka soo horjeeda ...
Mid kale oo ka mid ah ciyaaraha guddiga ugu fiican qoyska, oo leh su'aalo iyo caqabado dhammaan xubnaha. Guuleystaha ayaa noqon doona kan ka gudba guddiga marka hore, laakiin taas waa inaad su'aalaha si sax ah u hesho. Waxaa loo ciyaaraa kooxo, iyadoo caruurtu ay ka soo horjeedaan waalidiinta, inkastoo kooxo isku dhafan sidoo kale la samayn karo.
Iibsashada carruurta ee waalidka
Sheeko Culays ah
Ciyaarta guddiga qoyska, ayaa ciyaaryahan kastaa waxa uu qaadanayaa doorka neefka cufan, kaas oo ay tahay in uu badbaadiyo gabadha ay jecel yihiin, maadaama ay u afduubatay wax xun oo qarsoodi ah. Buug sheeko oo ku jira waxa uu noqon doonaa hage sheekada iyo tillaabooyinka la raacayo sabuuradda...
Soo iibso Sheeko Wacan
Bang! Ciyaarta Wild West
Ciyaar turubka ah oo dib kuugu celinaysa wakhtiyadii duurjoogta, oo ku taal waddo boodh leh oo leh dildilaaca dhimashada. Halkaa, sharci-dambiyayaashu waxay wajihi doonaan shariifka, shariifku waxay ka soo horjeedaan sharci-darrada, iyo diidmadu waxay dejin doontaa qorshe sir ah oo ay ugu biirayaan mid ka mid ah bamdosyada ...
Martida aan munaasabka ahayn ee Gloom
Ciyaar ay jiri doonaan marti aad u xun, qoys burcad ah, iyo guri guri. Maxaa khaldami kara? Kani waa ciyaarta kaadhka Gloom, kaas oo u yimaadda balaadhinta ciyaarta aasaasiga ah.
Iibka Martida Aan Haboonayn
Ciyaaraha looxa madadaalada ee loo ciyaaro qoys ahaan
Laakiin haddii waxa aad raadinayso ay tahay in aad wax yar ka sii dheeraato oo aad hesho ciyaaraha looxa ugu qosolka badan si aanad u joojin qosolka, oohinta qosolka, iyo in calooshaada ay dhaawacdo, kuwa kale waa kuwan. cinwaanada kaa dhigi doona inaad hesho wakhtiga ugu fiican:
Game Off Guutada madax-ilaa-madaxa ah
Ciyaarta guddiga qoyska oo ku habboon da' kasta, oo loo sameeyay dadka tartanka iyo xasaasiga ah. Waxay leedahay 120 duels gaar ah oo fool ka fool ula yeesho qaraabadaada. Waa inaad ku muujisaa kartidaada, nasiibkaaga, geesinimadaada, maskaxdaada ama awoodaada jireed. Ciyaartoyda inteeda kale waxay u dhaqmaan sidii garsoore si ay u go'aamiyaan guusha. Ma ku dhiiratay?
Mid ka mid ah ciyaaraha ay jecel yihiin qoysasku si ay ugu tijaabiyaan dulqaadkaaga, xidhiidhkaaga iyo awoodda aad u gudbin karto qaab-samaynta. Waxay ku habboon tahay carruurta, dhalinyarada iyo dadka waaweyn. Qof kastaa wuxuu heli doonaa madadaalo ciyaar iyo is dhexgalka. Waxaa ku jira 250 kaarar oo qaybo kala duwan ah, waana inaad ka dhigtaa kuwa kale inay qiyaasaan waxaad rabto inaad tilmaamo ku muujiso.
Ciyaartan waxaa loogu talagalay kuwa jecel mala-awaalka, ikhtiraacida iyo sheeko faneedka xiisaha leh. Waxay leedahay 9 laamood (dareen, calaamad, shay, meel, ...) oo aad ku rogi karto in ka badan 1 milyan oo isku-dar ah sheekooyinka ay tahay inaad abuurto iyadoo ku xiran waxaad la timid. Ku habboon da'da 6 iyo wixii ka weyn.
Mid kale oo ka mid ah ciyaaraha ugu fiican ee madadaalada qoyska. Waxay leedahay derin midabyo leh halkaas oo aad u baahan doonto inaad taageerto qaybta jidhka ee lagu tilmaamay sanduuqa roulette ee aad ka soo degtay. Sawiradu waxay noqon doonaan kuwo adag, laakiin hubaal waxay kaa dhigi doonaan qosol.
Ciyaaraha Cocktail- Ugha...
Ciyaar turubka qoyska oo dhan, oo ku haboon da'da 7+. Halkaa waxa aad ka gashanaysaa qolo goblan ah oo taariikhi hore ka soo jeedda, oo ciyaaryahan kastaa waxa uu ku soo celinayaa sawaxan iyo sawaxan is daba joog ah oo uu raacayo kaadhadhka ka soo baxa oo ujeedadu tahay in uu noqdo hogaamiyaha cusub ee qabiilka. Waxyaabaha khiyaanada leh ee ku saabsan ciyaartan ayaa ah inaad xifdiso codadka ama ficillada kaadhadhka si tartiib tartiib ah u urursan doona oo ay tahay inaad u ciyaarto sida saxda ah ...
Iibso Ugha Bugha
Devir - Ubongo, ciyaarta ...
Ubongo waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu xiisaha badan qoyska oo dhan, oo lagu taliyay dadka ka weyn 8 sano. Sameeyayaasheedu waxay xaqiijinayaan inay tahay mid kacsan sababta oo ah sida ciyaartoygu isku dayi doonaan inay isku mar ku xidhaan qaybaha kooxdooda; waa wax la qabatimo sababtoo ah markaad bilowdo ma awoodid inaad joojiso; oo fudud marka la eego xeerarkeeda.
Sidee loo doortaa ciyaarta guddiga qoyska ee wanaagsan?
Si aad si fiican u doorato ciyaaraha guddiga qoyska ugu fiican, qaar ka mid ah faahfaahinta muhiimka ah waa in la tixgeliyo:
Waa inay lahaadaan qalooc waxbarasho oo sahlan. Waa muhiim in makaanikada ciyaarta ay fududaato in la fahmo dhalinyarada iyo waayeelka labadaba.
Waa inay noqdaan kuwo aan waqti lahayn, sababtoo ah haddii ay la xiriiraan waayihii hore ama qaar ka mid ah waxyaalaha casriga ah, kuwa yaryar iyo waayeelka ayaa xoogaa lumi doona.
Iyo, dabcan, waa inay noqotaa mid madadaalo u leh qof walba, oo leh mawduuc guud oo badan oo aan loogu talagalin dhagayste gaar ah. Marka la soo koobo, yeelo da'o kala duwan oo lagu taliyay.
Waxa ku jira waa in ay ahaadaan dhammaan dhagaystayaasha, taas oo ah, waa in aan lagu xaddidin dadka waaweyn oo keliya.
Ahaanshaha qoyska oo dhan, waa inay ahaadaan ciyaaro aad uga qaybqaadan karto koox-koox ama aad u ogolaato tiro badan oo ciyaartoy ah si aan qofna looga tagin.
Wadada buuxda ee maqaalka: I sii wakhti firaaqo » General » Ciyaaraha guddiga ugu fiican ee qoyska